အကောင်းဆုံး ခွဲစိတ်လက်စွဲ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် ခွဲစိတ်လက်စွဲ စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ခွဲစိတ်လက်စွဲ. ကျွန်ုပ်တို့သည် "အရည်အသွေးမြင့် လျင်မြန်စွာ ပေးပို့ခြင်း၊ နှင့် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်း" ၏ အမြဲတည်ရှိနေသော နိယာမကို ကျွန်ုပ်တို့ တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ဖောက်သည်များနှင့် နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုတွင် အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အမြဲရှာဖွေနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၏ အဆင့်အတန်းမြင့်သော သူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်များ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်လိုအပ်သည်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ၊ သင့်တောင်းဆိုမှုကို ကျေနပ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အောင်မြင်မှုဆီသို့ ပိုမိုရွေ့လျားနိုင်စေရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါမည်။ ပြိုင်ပွဲနှင့် သင့်ကိုယ်သင် ကွဲပြားစေမည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။
ပုံစံ - H45 series
H6 series နှင့်ကွဲပြားသည်,H45 series အမြင့်-speed dental handpiece ကို ၄၅ ခုတပ်ဆင်ထားသည်-ဘွဲ့ခေါင်း,၎င်းသည်ခွဲစိတ်မှုဖြောင့်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အားသာချက်ရှိသည်-ထောင့်လက်ကိုင်.၎င်းသည်ခံတွင်း၏ posterior molar ကိုခွဲစိတ်ရန်အထူးသင့်တော်သည်.ဖြည့်စွက်ကာ,သွားဆရာဝန်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံကိုရနိုင်သည်.စိတ်ရှည်ရင်တောင်’ပါးစပ်ဖွင့်ခြင်းသည်သေးငယ်သည်,handpiece သည်ကုသမှု site ကိုအလွယ်တကူရောက်နိုင်သည်.
ခေါင်းအရွယ်အစား: Ø11.2 x H13.၅ မီလီမီတာ
Bur အရွယ်အစား: Ø1.59~1.၆၀ မီလီမီတာ/ISO1797-အမျိုးအစား ၁(fiber optic ရရှိနိုင်ပါသည်)
ထူးခြားချက်:PVD coated တိုက်တေနီယမ်ကိုယ်ထည်,ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်,ဂျပန်ကြွေထည်，push ခလုတ်,သုံးဆဖြန်းပြီးလဲလှယ်နိုင်သောကျည်တောင့်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sterilizationautoclaves.com/my/surgical-handpiece.html
အကောင်းဆုံး ခွဲစိတ်လက်စွဲ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။
Low Speed Handpiece ဖြစ်သည်